सुस्त पेट्रोलियम पाइपलाइन, अलमलमै वित्यो दुई वर्ष ४,१३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने, २५ हजार रुख काट्नुपर्ने – Gaule Media ::
Home/अन्य/सुस्त पेट्रोलियम पाइपलाइन, अलमलमै वित्यो दुई वर्ष ४,१३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने, २५ हजार रुख काट्नुपर्ने
सुस्त पेट्रोलियम पाइपलाइन, अलमलमै वित्यो दुई वर्ष ४,१३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने, २५ हजार रुख काट्नुपर्ने
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०४:१०
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना घोषणा गरेर अघि बढाएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम निकै सुस्त देखिएको छ । भारतसँग सम्झौता सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा लामो समय वितिसक्दा बहुप्रतिक्षित यो आयोजना अझै अलमलमा रुमल्लिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म ‘प्रगति’ छलफलमै सीमित देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले ७ भदौ ०७२ मा पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच नेपाल र भारतबीच रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता सम्पन्न भएको ३० महिनामा उक्त परियोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । मन्त्री थापाले त निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सकिने दावी समेत गरेका थिए ।
तर अहिले सम्झौता भएको २६ महिना वितिसक्दासमेत पाइपलाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सम्झौता अनुसार आगामी चैतसम्म पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर पाइपलाइन निर्माणमा अहिलेसम्म ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । जसका कारण पाइपलाइन निर्माण पर धकेलिएको छ ।
कति भयो काम ?
निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतका अनुसार अझै पनि पाइप विच्छ्याउने काम सुरु भएको छैन । पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि आवश्यक पर्ने पाइपका लागि टेन्डर भइसकेको उनले बताए । भारतीय आयल निगमले आवश्यक पाइपका लागि टेन्डर गरिसकेको छ । उक्त टेन्डरअनुसार ठेकेदारमार्फत पाइप खरिद भइसकेको निगमले जनाएको छ ।
खरिद गरिएका पाइप र अन्य उपकरण नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा भन्सार छुट लगायत सुविधाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको निगमले बताएको छ । अब पाइप विछ्याउने काम धमाधम अघि बढ्ने निगमले जनाएको छ । यसबाहेक आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा देखिएका अनेक अवरोधको पार लाग्न सकेको छैन ।
अवरोध कहाँ ?
पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि ‘साइट क्लियरेन्स’ सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा घर टहरा तथा अन्य संरचना र रुखको अवरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा झण्डै २५ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ भने करीब चार हजार एक सय ३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने निगमले यसअघि तयार गरेको आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुख र घरटहराको विषय अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिसकेका छैनन् । त्यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका लागि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत, टेलिफोन लगायतका तार पनि समस्याको रुपमा रहिआएका छन् । यी समस्या अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिन सकेका छैनन् ।
पाइपलाइन विस्तारका लागि निगमले केही समयअघि बाराको सीमरामा छुट्टै कार्यालयसेत स्थापना गरिसकेको छ । पाइपलाइन विस्तारको कामलाई सहज बनाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए ।
यसअघि सम्झौता गर्दा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो समय उक्त रुटमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ रुट मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज तय भएको छ ।
अघिल्लो रुटको कुल लम्बाई ४१ किलोमिटर थियो । जसमा ३९ किलोमिटर नेपालमा र बाँकी दुई किलोमिटर भारतीय भूभागमा रहन्थ्यो । भारतको आफ्नै असहजताका कारण पछिल्लो समय तय भएको योजना अनुसार अब पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाई झण्डै ६९ किलोमिटर पुगेको छ । अब भने मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ६८ दशमलव ९६ किलोमिटर लम्बाइमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ ।
रेलमार्गका कारण रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न असहज हुने भएपछि मोतिहारीमा सारिएको हो । नयाँ रुटअनुसार रक्सौलदेखि भारतीय सिमानासम्म करीव ३६ किलोमिटर र सिमानादेखि मोतिहारीसम्म करीव ३३ किलोमिटरमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । अहिले आईओसीले मोतिहारीमा डिपो निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आह्वान गरिसकेको निगम बताउँछ ।
पाइपलाइनको दूरी बढे पनि त्यसको खर्च भने भारतले नै व्यहोर्नेछ । यसअघि ४१ किलोमिटर पाइपलाइन आयोजनाका लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ भारतीय सरकारले र बाँकी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आईओसीको टोली नेपाल आउँदै
पेट्रोलियम पाइपलाइनका सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधि बुझ्न आयोजनाका निर्देशक डा. अनिस अग्रवालको एक टोली नेपाल आउने तयारी गरेको छ । उक्त टोली यही नोभेम्बर ९ गते नेपाल आइपुग्ने निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए । ‘उक्त टोली आएपछि पाइपलाइन अघि बढाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सघन छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय छलफलपछि आयोजना निर्माण सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देश हुने र त्यसले पाइपलाइन विस्तारमा गति मिल्नेछ ।’
फाइदा के–के ?
पाइपलाइन बने इन्धन ढुवानीबापत लाग्ने वार्षिक करीव एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्यांकर ढुवानी र जनशक्ति खर्च जोखिने विश्वास छ ।
पाइपलाइन बनेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटरसम्म इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ ।
पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ७८ लाख लिटर इन्धन अट्न सक्नेगरी भण्डारण क्षमता पनि विस्तार गरिँदैछ । योसँगै अर्को नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना पनि निगमको छ ।
नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसँगै त्यससँग जोडिने गरी सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पहिलो चरणमा र त्यसलगत्तै राजधानी काठमाडौंसम्मै उक्त पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।
पाइपलाइन बनेपछि नेपालले ५ वर्षसम्म भारत सरकारसँग इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रत्येक ५ वर्ष पुगेपछि इन्धन खरिदको नवीकरण हुनेछ । यसअघि भारतले २५ वर्षसम्म इन्धन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि नेपाली पक्षको असहमतिपछि त्यसलाई ५ वर्षमा झारिएको थियो ।
मिनी म्याराथन दौड प्रतियोगिता सम्पन्न
२७ माघ २०७६, सोमबार १५:०१
स्थलगत अध्ययनपछि चिनियाँ टोलीले भन्योः केरुङ-काठमाडौं रेल सम्भव, नीतिगत जटिलता फुकाउन सुझाव
२४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १४:०६
७ वटा गोली लागेर पनि यसरी बचिन ज्वाला ‘मलाई बाच्ने रहर छ, सायद त्यही भएर आज जिवित छु।’
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार १४:२०
स्वतः स्थायी गर्न राहत शिक्षकको माग
२१ आश्विन २०७५, आईतवार १४:०१